GBM-16D-R ကိုနှစ်ဆခြမ်းဘီဗဲလ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Taole Machinery
ပန်းကန် Edge Mills စက်
GMMA-60 မိမိကိုယ်မိမိ propelled သတ္တုအစွန်း chamfering စက်
အိတ်ဆောင် & လက်ကိုင်လျှပ်စစ်ပိုက်ဘီဗဲလ်
GMMA-80A မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပန်းကန် beveling ...
စက် 0-90 ဒီဂရီ beveling GMMA-60L အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေး
သတ္တုပန်းကန်ဘီဗဲလ်လိုအပ်ချက်များကိုအများစုတွေ့ဆုံရန်နှစ်ဆခြမ်းဘီဗဲလ်လုပ်ငန်းစဉ် turnable option ကို .. မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အေးမှေးကို, safy, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်အကွာအဝေးနှင့်အတူစက် beveling ။
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: GBM-16D-R ကို
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: GIRET သို့မဟုတ် TAOLE
လက်မှတ်: အီး, ISO9001: 2008 SIRA
မူလအစရာ: Kunshan, တရုတ်
Delivery Date: 5-15 နေ့ရက်များ
MOQ: 1 သတ်မှတ်မည်
GBM-16D-R ကိုနှစ်ဆခြမ်း ဘီဗဲလ် စက်ဖြတ်တောက်
မော်ဒယ် 1: Cutter သံမဏိဖမ်းခြင်းနှင့်အသေးစားသံမဏိပြား processing နေစဉ်အလုပ်ပြီးမြောက်ရန်စက်သို့ဦးတည်သွားစေ။
Modle 2: စက်သံမဏိအစွန်းတစ်လျှောက်တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ကြီးမားသောသံမဏိပြား processing နေစဉ်အလုပ်ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်။
NO Model ။ GBM-16D-R ကို doubel ခြမ်းဘီဗဲလ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ AC အ 380V 50HZ
မော်တော်မြန်နှုန်း 1450r / မိနစ်
feed မြန်နှုန်း 1.2-1.6metesr / မိနစ်
ညှပ်အကျယ် > 115mm
ဖြစ်စဉ်ကိုတာရှည် > 100mm
ဘီဗဲလ်အိန်ဂျယ် ဖောက်သည်ရဲ့ requre အဖြစ် 25-45 ဒီဂရီ
ရှုးပြား φ 115mm
Worktable အမြင့် 700mm
ကြမ်းပြင် Space ကို 800 * 800mm
အလေးချိန် ဘ 212KGS GW 365KGS
Turnable option ကို GBM-16D-R ကိုများအတွက်အလေးချိန် ဘ 315KGS GW 360KGS
မှတ်ချက်: ကိစ္စတွင် + လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ရှုး + Tools များ၏ 3pcs အပါအဝင်နျ Standard စက်
ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယမ်စသည်တို့: သတ္တုပစ္စည်းများအတွက်ရရှိနိုင် 1.
1500W မှာ 2. IE3 နျ Standard မော်တာ
3. မြင့်အသုံး 1.2-1.6meter / မိနစ်မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
အအေးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် Non-ဓာတ်တိုးဘို့ 4. Inported လျှော့ချရေးဂီယာသေတ္တာ
5. အဘယ်သူမျှမအပိုင်းအစသံ splash ပိုမိုလုံခြုံ
6. မက်စဘီဗဲလ်အကျယ် 28mm ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
7. လွယ်ကူစစ်ဆင်ရေးနှင့်နှစ်ဆခြမ်းဘီဗဲလ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ turnable ။
ကျယ်ပြန့်အာကာသ, ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖိအားသင်္ဘောသင်္ဘော, သတ္တုဗေဒနှင့်ချအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံဂဟေဆော်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလယ်ပြင်၌အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယခင်: Manufacturer of Automatic Cold Pipe Cutting Circular Saw Machines
နောက်တစ်ခု: စက် beveling GBM-16D မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိပန်းကန်
ဘီဗဲလ် Mach ine ထုတ်လုပ်ခြင်း
နှစ်ဆခြမ်း beveling စက်
ma beveling GBM-12D-R V ကို & X ကို type ကိုပူးတွဲပန်းကန် ...
စက် beveling GBM-16D မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိပန်းကန်
စက် beveling GBM-12D သတ္တုပန်းကန်